Kai Havertz Oo Ka Shaaciyey Waxa Uu Horyaalka Premier League Kaga Duwan Yahay Bundesliga, Kulankii Uu U Saftay Chelsea & Wixii Uu Dareemay - Gool24.Net
Kai Havertz Oo Ka Shaaciyey Waxa Uu Horyaalka Premier League Kaga Duwan Yahay Bundesliga, Kulankii Uu U Saftay Chelsea & Wixii Uu Dareemay
Saxeexa cusub ee Chelsea ee Kai Havertz waxa uu nasiib u yeeshay in ciyaartii koowaad ee kooxdiisa ee xili ciyaareedka cusub ee Premier League uu kasoo muuqdo, waxaana sidiisa oo kale ay kulankii ugu horreysay u ahayd Timo Werner oo kaga soo horreeyey Stamford Bridge, isla markaana tababarka waqti fiican lasii qaaday Blues.
21 jirkan oo muddo laba usbuuc ka yar tababarka la qaatay ciyaartoyda Chelsea, kaddib £72 milyan oo Gini oo uu ugaga soo wareegay Bayer Leverkusen ayaa waxa uu sheegay in horyaalka Premier League uu aad uga adag yahay Bundesliga oo uu kusoo qaatay sannadihii ugu dambeeyey.
Kai Havertz oo warbaahintu wax ka weydiisay ciyaartii ugu horreysay ee uu u saftay Chelsea ayaa yidhi: “Waxay ahayd ciyaar aad u adag, sababtoo ah waxa aan kasoo laabtay fasax dheer, waxaanan kaliya tababartay shan ama lix maalmood oo kaliya oo aan kooxdan la joogay. Laakiin waxa ugu muhiimsan waa inaanu guuleysanay ciyaartoydii ugu horreysay ee aan safto.”
Laacibkan oo u warramayay wargeyska Evening Standard ayaa waxa uu faahfaahiyey farqiga u dhexeeya Premier League iyo Bundesliga, waxaanu yidhi: “Premier League ayaa aad uga adag yahay Bundesliga. Waxa aan taas ku arkay tababarka iyo sidoo kale ciyaartaba. Waxa aan ku faraxsanahay inaan ciyaaray 80 daqiiqadood, waxaanan rajaynayaa inaan sii wadi doono usbuuca dambe.”
Frank Lampard ayaa isaguna amaan u jeediyey Havertz, waxaanu tilmaamay in marka ay kubaddu ka lunto uu dib usoo laabanayay oo uu isku dayay inuu ciyaartoyda kale ka reebo, taasina tahay wax wanaagsan oo uu ka arkay saxeexiisa cusub.
Kulanka soo socda, Chelsea waxay la ciyaari doontaa Liverpool oo ay ku martigelin doonto garoonka Stamford Bridge, waxaanu Havertz rajaynayaa inuu kusoo bilaaban karo, isla markaana uu la iman doono qaab ciyaareed ka horumarsan sidii uu ahaa ciyaartii hore oo uu sameeyey qaladaad dhinaca kubbad dhiibista ah.